camera - Synonyms of camera | Antonyms of camera | Definition of camera | Example of camera | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for camera
Top 30 analogous words or synonyms for camera
အပိုလို ၁၁ Saturn V carrying Apollo 11 rises past the launch tower camera
အပိုလို ၁၁ A mounted slowscan TV camera shows Armstrong as he climbs down the ladder to surface.
အပိုလို ၁၁ Mike Simons, director of the National Electronics Museum, assembles an Apollo TV camera for display at the Newseum.
ကင်မရာ ကင်မရာဆိုသည်မှာ ရုပ်ပုံများကို ရုပ်သေဓာတ်ပုံ အနေနှင့် ဖြစ်စေ ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယိုတို့ကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲနေသော ရုပ်ပုံများအနေနှင့် ဖြစ်စေ ဖမ်းယူရိုက်ကူးသော ကိရိယာဖြစ်သည်။ ကင်မရာဆိုသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ လက်တင်ဘာသာ camera obscura မှဆင်းသက်လာပြီး မှောင်နေသောအခန်း ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုသို့အမည်မှည့်ခေါ်ရခြင်းမှာ ရှေးခေတ်ကာလများက ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် အခန်းတစ်ခုလုံးကို ပြင်ပ၌လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ရုပ်ပုံများကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးရန်အတွက် အသုံးချသောစနစ် ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ကင်မရာများသည် ထိုစနစ်မှ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Jangle pop UKတွင် The Smith, Felt နှင့် Aztec Camera တို့ကို jangle pop ၏အစိတ်အပိုင်းဟု စဉ်းစားနိုင်သည်။ C86/CD86 ဖြစ်ရပ်မှ melodic guitar တီးဝိုင်းများဟု ခေါ်နိုင်သည်။ ဩစတေးလျတီးဝိုင်း The Church သည် ဤအမျိုးအစားဟုယူဆနိုင်သည်။ ၈၀s နောက်ပိုင်းတွင် The Tragically Hip နှင့် Barenaked ladies jangle ပုံစံများဖြစ်သည်။
ဆိုနာတာ ဘာရော့ကာလ ဟုခေါ်သော ၁၇ရာစုနှင့် ၁၈ရာစု ဦးပိုင်းကာလာများတွင် အာကန်ဂျလို ကိုရယ်လီ ကဲ့သို့သော ဂီတပညာရှင်များက မုဗ်မင့် အများအပြား ပါဝင်သော ဆိုနာတာများကို ရေးစပ် သီကုံးခဲ့ကြသည်။ ဆိုနာတာ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ “sonata da camera” (“room sonata” သို့ “chamber sonata”) ဖြစ်ပြီး လူတို့၏ အိမ်တွင် တီးမှုတ်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ အခြား တစ်မျိုးမှာ “sonata da chiesa” (“church sonata”) ဖြစ်ပြီး ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းများ တွင် တီးမှုတ် ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။
အက်ဒ်ဝင် ဟားဘတ် လန်း ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဖလင်ကိုထည့်ပြီး ချက်ချင်းပုံထွက်နိုင်သည့် ကင်မရာတစ်မျိုးကို တီထွင်ခဲ့ပြန်သည်။ ယင်းကင်မရာကို "Land Camera" ဟုသူကအမည်ပေးခဲ့သည်။ တီထွင်ပြီး ၂ နှစ်ကြာမှ ဈေးကွက်ကို ထုတ်ရောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထုတ်သမျှကင်မရာများသည် ပထမဆုံးနေ့မှာပင် ရောင်းကုန်သွားသည်အထိ အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ Polaroid ကုမ္ပဏီသည် အောင်မြင်ခဲ့သည့်နည်းတူ သုတေသနလုပ်ငန်းများလည်း မပြတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် တီထွင်နေရလျှင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ လူစားမျိုးဖြစ်သဖြင့် တပည့်များက အစားအသောက်တို့ကို ရှေ့တွင်လာချပေးမှ ယူစားသည်အထိ အလုပ်ကို ကြိုးစားသူဖြစ်သည်။ သူ့ဘေးတွင် တီထွင်သည့် အဖွဲ့ပေါင်းများစွာကိုထားပြီး သူကိုယ်တိုင် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သောကြောင့် စံပြုလောက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဟုလည်း ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
Black metal လှီးခဲ့သည်။ Mayhem ၏ဒရမ်သမား Hellhammer က Dead သည်ထူးခြားသော Corpse paint ကို ပထမဆုံးဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်တွင် ပျံနှံခဲ့သည်။ Per Yngve Ohlin ၏လက်ကောက်ဝတ်နေရာတွင် အအက်အကွဲကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဦးခေါင်းပေါ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Dead ၏သေတမ်းစာတွင် Excuse all the blood ဟုသော စာကို တွေ့ရှိရသည်။ ရဲကို မခေါ်ခင်တစ်ခါသုံး camera ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အလောင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် အချက်အလက်များကို စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုဓာတ်ပုံများထဲမှ တစ်ခုသည် live album: Daw of the Black Hearts၏ cover ဖြစ်လာခဲ့သည်။